कास्की २ उपचुनावः मतदान शुरु – Samacharpati
लिस्बनमा बस्दै आएका आठ नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि
घरमा उपलब्ध सामाग्रीको प्रयोगबाट यसरी तयार गर्नुहाेस घरेलु क्रिम !
राहतका लागि नागरिकता मात्र भए हुने
पोखरा, मंसर १४ । कास्की २ मा शनिबार (आज) मतदान हुँदै छ । मतदानको सबै तयारी सकिएको छ । निर्वाचन हुने सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुगेर आवश्यक संरचना बनाईसकेका छन् । मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत, कर्मचारी र सहयोगी गरी कुल ४ सय १० जना कर्मचारी कास्की २ मा खटिएका छन् । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ५ जना कर्मचारी पर्ने गरी ब्यवस्थापन मिलाईएको सहायक निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘कर्मचारीहरु मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नुभयो । मतपत्र सहितका सामग्री पुगिसके । मतदाताका परिचयपत्र वितरण भैसकेको छ,’ उनले भने, ‘मतदानका लागि सबै ठाउँ तयार छ ।’
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि कास्कीमा उपचुनाव हुन लागेको हो । ११ राजनीतिक दल र १० स्वतन्त्र गरी २१ जना चुनावी प्र्रतिश्पर्धामा छन् । ७१ हजार ८ सय ७१ जनाले यो क्षेत्रमा मतदान गर्नेछन् । अघिल्लो चुनावभन्दा अहिले १ हजार २ सय २० जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । चुनावका लागि यहाँका विद्यालयहरु बन्द गरिएका छन् भने शुक्रबार राती १२ बजेपछि सवारी साधन गुड्न समेत रोक लगाईएको छ ।
अघिल्लो चुनावमा ७० हजार ६ सय ५१ मतदातामध्ये प्र्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा ४९ हजार ९ सय १३ मत खसेको थियो । प्रदेशसभा (क) मा २६ हजार ४ सय ३३ र (ख) मा २३ हजार ५ सय २० मत खसेको थियो । प्रत्यक्षमा भन्द्या समानुपातिकर्फत ७ मत कम खसेको थियो । समानुपातिक तर्फ ४९ हजार ९ सय ६ मत खसेको थियो भने प्रदेशसभा (क) मा २६ हजार ४ सय ६ र प्रदेशसभा (ख) मा २३ हजार ५ सय मत खसेको थियो । यसपालि पनि ५० हजार हाराहारीमा मत खस्ने अनुमान छ ।
कास्की २ मा पोखरा महानगरका ११ वटा वडा पर्दछन् । ४, ७, ८, ९, ११, १५, १६, १७, २०, २१ र ३३ नम्बर वडाका मतदाताले यो उपचुनावमा मतदान गर्ने छन् ।
अधिकांशले पाउदैनन् आफुलाई मत दिन
कास्की २ मा उम्मेदवार बनेपनि अधिकांशले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । ५ राजनीतिक दल र २ स्वतन्त्र उम्मेदवार बाहेक अरुले आफुलाई मत दिन नपाउने भएका हुन् । नेकपा उम्मेदवार विद्या भट्टराईले पोखरा ३३ बाट मतदान गर्नेछिन् भने साझा पार्टीकी रजनी केसीले पोखरा ४ बाट मतदान गर्नेछिन् । राप्रपाका रोमबहादुर भण्डारीले पनि आफैलाई मत दिन पाउनेछन्् । उनले पोखरा १५ बाट मतदान गर्नेछन् । यस्तै, नेकपा मालेका टेकनाथ भण्डारी पनि आफैलाई मतदान गर्न पाउने भाग्यमानी हुन् । उनले पोखरा २१ बाट मतदान गर्ने छन् । राप्रपा संयुक्तकी गंगा मल्ल पोखरा ७ कि मतदाता हुन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सुनिलबहादुर कोइराला र रनबहादुर दमैले पनि आफुलाई मतदान गर्न पाउने छन् । कोइरालाले पोखरा ४ र दमैले पोखरा १७ बाट मतदान गर्ने छन् । काँग्रेस उम्मेदवार खेमराज पौडेल कास्कीकै भएपनि उनी क्षेत्र नम्बर ३ का स्थायी बासिन्दा हुन् । काँग्रेस बीपीका चन्द्रबहादुर रानाभाट क्षेत्र नम्बर १, देशभक्त समाजका विरबहादुर विक कास्की र समाजवादी पार्टीका धर्मराज गुरुङ कास्की ३ का स्थायी बासिन्दा हुन् । उनीहरुको मताधिकार समेत उतै छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार यज्ञप्रसाद पंंगेनी स्याङजाबाट आएका हुन् भने सुनिल भुषाल कपिलबस्तु, दीपक रेग्मी सुर्खेत र पुरुषोत्तम खनाल स्याङजाबाट आएर उम्मेदवारी दिएका हुन् । कास्कीकै भएपनि केही स्वतन्त्र उम्मेदवार फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका छन् । कमलजंग कुवँर, जमुना शर्मा, लक्ष्मी कुमारी भुजेल र उमनाथ गौतम कास्की ३ तथा नवराज बास्तोलाको कास्की १ मा मतदाता नामावली छ ।
केही राजनीतिक दलले पनि आफ्ना उम्मेदवार बाहिरबाट झिकाएका छन् । जनमुक्ती पार्टीका पूर्णबहादुर राना तनहूँ रिसिङका स्थायी बासिन्दा हुन् भने मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका रियाज गुरुङ पर्वतका हुन् ।
आधा मतदानस्थल संवेदनशील
कास्की २ मा आधाभन्दा बढी मतदान स्थल संवेदनशीलको सूचीमा छन्् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रम नजिकै बम विस्फोट भएपछि कास्कीका मतदाताहरुमा केही त्रास बढेको छ । यसले सुरक्षा चुनौति समेत बढाएको छ । त्यसको अघिल्लो दिन पनि पोखरा ३३ का वडाध्यक्षको गाडीमा बम विस्फोट भएको थियो । यद्यपी प्रहरीले यसलाई शक्तिशाली बम नभएको जनाएको छ । बम विस्फोटमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ । कास्कीका ३२ मध्ये आधाभन्दा बढी मतदानस्थलहरुलाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरु परिचालन गरिएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले जानकारी दिए । देशभरीमै हुने उपनिर्वाचन मध्ये एक मात्रै प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएकोले पनि यहाँ धेरैको ध्यान केन्द्रित छ ।
ठूला दलहरु जित्नका लागि कम्मर कसेर लागेका छन् भने साना दलहरु आफ्नो अस्थित्व देखाउनका लागि प्रतिश्पर्धामा छन् । यद्यपी सबैले जित्ने दावी भने छोडेका छैैनन् । ‘अवाञ्छित क्रियाकलापलाई रोक्नका लागि सुरक्षाफौज परिचालन भैसकेको छ । त्यसअनुसारको रणनीति बनाउने र थप सजगता अपनाउने काममा सचेत छौं,’ केसीले भने, ‘हामी सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन चाहान्छौं । सुरक्षाको अधिकतम ब्यवस्थापन मिलाएका छौं । मतदाताहरुलाई ढुक्क भएर मतदानमा भाग लिन आग्रह गर्दछु ।’
सबै मतदानस्थल र मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन क्षेत्रमा बर्गिकरण गरिएको छ । पोखराको मुख्य शहरी क्षेत्रलाई कम सम्बेदनशील क्षेत्र, शहरोन्मुख ठाउँलाई संवेदनशील र ग्रामिण क्षेत्रका मतदानस्थलहरु अति संवेदनशीलको सूचीमा परेका छन् । संबेदनशीलताको आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको केसीले जानकारी दिए । सुरक्षा निकायको रिपोर्टिङ, भौगोलिक विकटता, दलहरुबीचको प्रतिष्पर्धा र चुनाव बिरोधी गतिविधी गर्ने समूहहरुको गतिविधिलाई मुल्यांकन गरेर एक तिहाई मतदान स्थललाई अति संवेदनशिलको रुपमा पहिचान गरिएको छ । यहाँ ३२ मतदानस्थल र ८२ मतदान केन्द्र छन् ।
मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र अन्तिम घेरामा नेपाली सेना तैनाथ हुने छन् । हरेक मतदानस्थलमा १५ देखि २० प्रहरी, २२ जना सशस्त्र र आवश्यकअनुसार नेपाली सेनालाई खटाईएको छ ।
आधा दर्जभन्दा बढी पक्राउ
चुनाव लक्षित सुरक्षामा चुनौति बढ्न सक्ने भन्दै कास्की प्र्रहरीले शंकास्पद केही ब्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको छ । बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी)की केन्द्रिय सदस्य एबम कास्की जिल्लाकी कार्यबाहक अध्यक्ष आस्था नेपाली र मेघनाथ आचार्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । यसअघि प्रदर्शनी केन्द्रमा विस्फोट लगत्तै फिर्केखोला मापदण्ड सरोकार समितिका महासचिव कृष्णप्रसाद घिमिरे ‘टिकाराम’लाई पक्राउ गरेको थियो । पोखराबाटै पक्राउ परेका पत्रकारद्धय राजकुमार घिमिरे र आश तमुलाई प्रहरीले हिरासतमै राखेको छ । घिमिरेलाई प्रहरीमाथी गालिगलौज गरेको आरोप छ । उनीहरुलाई सार्वजनिक मुद्धामा अनुसन्धान भैरहेको बताईएको छ । श्रोतका अनुसार भुर्जुङखोलाका भीमसेन परियार र किसानसिहं गुरुङ पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।
DNA Nepal – Prakash dhakal
गण्डकी प्रदेश सरकारले लकडाउन प्रभावित मजदूरलाई राहत दिन ८५ वटै पालिकामा बजेट निकासा
कोरोना संक्रमीतको उपचारका लागि नेपाली सेनाको २० बेडको हाइ केयर सघन उपचार कक्ष निर्माण सुरु
राहत कोषमा मासबार आमा समूहको सहयोग
गण्डकी प्रदेश सरकारद्धारा ज्यालादारी मजदुरलाई राहत दिने उद्धेश्यले बजेट विनियोजन
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्धारा पूर्ववत् रुपले सामान ढुवानी गर्न उद्योगी व्यवसायीसँग आग्रह
एन प्याव्सन गण्डकी प्रदेशद्धारा चार वुँदे तनहुँ घोषणा पत्र जारी